Soil solika | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Soil solika
Ny fitsipika momba ny fiasan'ny fiara mandeha ho azy ho an'ny trano fonenana: fitaovana elektronika, bimetal ary hydraulics
Ny dingan'ny fanesorana ny trano fonenana dia ny vokatra fototra izay tsy fiantraikany amin'ny vokatra, fa koa ny fampivelarana ny vokatra ao anatiny. Misy fomba maro handroahana ny trano fonenana: automatique ary manual. Ampiasaina amin'ny tanana ny biriky, sehatra na trano fonenana misy tafo fanokafana.
Ahoana no hambolena sy hanorenana pastèque
Ny fanontaniana momba ny fambolena varimbazaha any amin'ny firenena dia lasa zava-dehibe kokoa. This berry is a store of nutrients. Manana vitamina sy trace izy io, izay mahasoa amin'ny diabeta, aretina ao amin'ny rafi-kadiny, ny aty sy ny voa, tsy lazaina fa voankazo tena tsara fotsiny. Tahaka ny zavatra hafa rehetra, ny pastèque iray ao amin'ny teti-bola manokana dia tsara lavitra noho ny nividy iray.
Karazana solifara ovy: fampiharana sy fananana
Ny entona potasioma dia karazana mineraly mineraly izay natao hamenoana ny filàna ny zavamaniry ho an'ny potasy. Amin'ny ankapobeny dia aseho amin'ny endriky ny solika tsy misy loto izy ireo indraindray, miaraka amin'ny fanampim-panafody hafa misy potassium amin'ny endrika toy izany izay mamela ny zavamaniry handevona azy. Ny soatoavin'ny ovy potsy Ny vidin'ny ovy potsy dia mamaritra ny maha-zava-dehibe ny potassium ho an'ny sakafo mahavelona amin'ny zavamaniry.
Ny charcoal ho toy ny zezika ho an'ny zaridaina, ny fampiasana ny zezika ho an'ny fambolena
Tsy misy tsiambaratelo fa trano maro ao an-tanindrazana, ary trano fonenana eny an-tanàna aza, dia mbola mafana amin'ny fanampiana amin'ny lavaka iray izay nodorana ny kitay. Vokatr'izany, ny tompon'ilay toeram-pambolena dia manana saribao sy lavenona be dia be, izay matetika no mivoaka avy hatrany. Na izany aza, dia azo ampiasaina ho vongan-drano ho an'ny zaridaina ny hazo sarobidy, noho izany dia azonao atao ny miaro ny faritra amin'ny tsimparifary sy ny bibikely, ary koa ny fehezin'ny tanimbary.
Potassium humate: fampitahana sy fampiharana ny fehiloha
Ny habetsa dia salady misy potassium na sodium, izay azo avy amin'ny asidra humic. Ny hume sy ny asidra no tena fototry ny tany, ny votoatiny dia ny vaksiny. Ho setrin'izany, ny humus dia tompon'andraikitra amin'ny fizotran'ny biochemika rehetra any amin'ny tany. Ny fananganana hémus dia miseho vokatry ny fatiantoka ny zavamiaina organika, ary avy eo ambany fitarihan'ny rano, oksizenina ary micro-organismes, ny humates dia azo.
Fampidiran-drano azota: ampiasao amin'ny tavy
Ireo akora azota dia zavatra tsy ara-dalàna sy ara-organika izay misy azota ary ampiharina amin'ny tany mba hanatsarana ny vokatra. Ny rivotra no singa fototra amin'ny zavamaniry, ny fiantraikany eo amin'ny fitomboan'ny voankazo sy ny voamadinika ary ny fambolena sy ny sakafo mahasalama. Izany no tena hery matanjaka izay afaka mampiova ny toe-batana ara-ponenan'ny tany, ary manome ny vokatra mifanohitra aminy - rehefa oversupplied and misused.
"Shine-1": torolàlana momba ny fampiasana ny zava-mahadomelina
Ny "Shining-1" dia vokatra biolojika ho an'ny famerenana ny fahavokarana amin'ny tany, fampitomboana ny famokarana vokatra ary famongorana aretina. Hiresaka momba ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina, ny fitsipika fampiharana sy ny dosage. Inona ny fanomanana "Shining-1" ampiasaina ary inona no mahomby? Ny fampiomanana dia ampiasaina mba hampisehoana ny tsimok'aretina samihafa sy ny fambolena voa nambolena, ny fitrandrahana radika ary ny sakafo fanampiny.
Pear "Tenderness": ny toetra, ny tombontsoa sy ny tsy fahampiana
Famaritana ny karazana Kalanchoe malaza indrindra
Varimbazaha karazana "Aladdin"
Ahoana ny fomba ahafahana maniry tsara: tsaramaso banana sy fomba hafa entina manangona voatabia
Ary raha tsy mitsimoka ny tsimokaretina
Misafidy ny karazan-tsakafo sy ny fandaniana tsara - Voninahitra ho an'ny mpandresy
Aostralia miteraka any an-trano
Handy: mampitombo, mamboly, mikarakara
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Soil solika